Semalt Expert Anotaura Nekutsvaga Kwezwi - Impact On SEO
Zvitsva zvekutsvaga kwezwi zvine zvinganzwisisika zvekutsvaga injini yekusimudzira asi ramba uchidarokuwedzera kukosha kupfuura makore. Zvinonzi mazwi ezwi anoenderera mberi mukuwana mukurumbira pamwe nehuruzhinji kana achienzaniswa nebhukukunyora mibvunzo pamabhokisi ekutsvaga smartphone.
Unonzi Abgarian, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt Digital Services, inotsanangura izwi rekutsvaga uye rinoenderana neSeO performance.
Chii Chinotsvaga Kutsvaga?
Kutaura kunorayira mune chimwe chinhu chine tariro yekugamuchira mhinduro inoreva izwitsvaga - on-demand workforce. Mazhinji emakambani emakambani ekugadzirwa kwekombiyuta anopfuurira kusanganisira zvinhu zvakatsvakurudza mazwi ekutsvakurudza mazwi pamashandi avo Mienzaniso inosanganisira "Ok,Google "yeGoogle," Siri "neApps madivaysi," Cortana "neMicrosoft," Alexa "muAmazon, uye" Bixby "yeSams.
Hafu yehafu yenhamba yose yeGoogle tsvaga inobva kumafoni. Kupererwa neidzi, makumi maviri kubva muzana kubva kwavari vanocherechedza zvakare kuzwi vanorayira kunze kwevashandi vanobata zvidzidzo zvavo. Parizvino, izwi rinotsvaga rinosvika makumi mapfumbamwe nemashanuchikamu chemutauro weChirungu, achivapa zvakajeka. Kubva pane zvakawanikwa neGoogle, ndizvo zvakaenzana nezwi revanhu rinozivikanwakururama.
Chikonzero chekuti izwi kutsvaga kukurumbira ndiko kushandiswa kwekushandiswa kwemu-digital digitavatsigiri vane minimal interfaces. Somuenzaniso, Amazon Echo's Alexa neGoogle's Home device zvinongobvuma chete pamashoko ekuraira nemirairo..Ivozvose zvinonakidza uye zvinobatsira, ndicho chikonzero vazhinji vashandisi vanowanzotanga chikafu-sechibatanidza kwavari vachiita kuti kukurukurirana zvive zvakasikwa.
Kutsvaga kukurukurirana kune imwe yenzira dzakakosha mukutsvaga injinipamwe ne70 muzana yemibvunzo yose yekutsvaga inosanganisira mutauro wepanyama. Vanhu vanotaura nemichina yavo yekutsvaga yedijiti nenzira imwecheteyo yavanodabvunza mibvunzo inotungamirirwa kune vamwe vanhu.
Kutsvaga kwezwi Kudiwa kweGoogle Tsvaga Zvitsva
Google inoenderera mberi kuita shanho huru mukutsvaga kukurukurirana, kunobva kubvaizwi kutsvaga, uye nekudaro kupindura mibvunzo. Iri kudzidza kudzidza uye kududzira mazwi ayo kushandiswa kwevanhu kushandisa chinangwa cheshandisiuye kununura mhinduro yakakosha zvikuru.
Somuenzaniso, munyaya iyo Google inogamuchira mibvunzo mitatu yakafanana yekutsvagapamusoro pekutenga shangu, inofanirwa kugadzirisa mitsva yaro yekutsvaga zvichienderana nekukosha kune vashandi vavariro. "Ndingatenga kupi shangu?" ichokwadichikumbiro. "Ndinofanira kutenga kupi shangu "Kwatingaitenga shangu" inosanganiswa nemafungiro uye chokwadi, zvichikonzera kusarerekerarechiito chinoratidza chinangwa. Kusiyana uku kunoratidza kuti kupesana, chinangwa kumarudzi ose akasiyana, uye kukwanisa kushanda zvakanangaMigumisiro inobatsira zvikuru pane zvinorehwa neGoogle kubva pakutsvaga.
Google ine mhinduro dzakajeka kune dzimwe mamiriro. Chinangwa cheGooglendekushanda sechitoro chimwe chete chekudzorera mhinduro uye kurayira vashandisi kune peji chaiyo ine zvinyorwa zvichitsvaga. Iyo yakafananakupa mhinduro imwe chete, iyo ndiyo Siri kana Alexa anoita apo vashandi vanovabvunza mibvunzo.
Zvikwata uye e-commerce nzvimbo dzinotya kuti makadhi echipinduriro anova dambudziko gurupamusoro pehuwandu hwemotokari kuenda kune imwe nzvimbo uye chiyero chekucheka. Zvinogona kuva zvechokwadi, asi mhinduro dzemakadhi dziri pano kuti dzigare uye yakanakisisa sarudzo yebhizimisi,ndekukwikwidza kukunda kana kuti njodzi inowanikwa nevaswikwi vavo.